Maitiro ekugadzirisa iTunes kurodha pasi matambudziko paMac | Ndinobva mac
Maitiro ekugadzirisa iTunes kurodha pasi matambudziko paMac
Nokuburitswa kweMacOS High Sierra, vakomana muCupertino vakafunga kuti yaive nguva yekutanga kubvisa maficha kubva kuTunes. Iyo yakakwezva kutarisisa, nekuda kwekukuvara kwayakakonzera kune vazhinji vashandisi ve iPhone ne iPad, yaive kubvisa mukana weApple app chitoro.
Iyi sarudzo inokurudzirwa kuitira kuti vashandisi vatange kushandisa iyo nyowani Chitoro cheApple chakauya kubva paruoko rweIOS 11, asi inomiririra dambudziko rakakomba kune vese vashandisi vanoda kuchengeta mafomu avo paMac, kana vangabviswa kubva chitoro. Asi zvisinei, iko kunyorera kubata edu nhare mbozha, iTunes ichisiya yakawanda yekuda.
Kunyangwe vazhinji vashandisi veMac vasingazvipire pakuisa imwe kana imwe application kuti vaedze, vazhinji vanozviita, izvo zvinoita kuti Mac yedu itange kushanda zvisirizvo nekufamba kwenguva nekupa matambudziko ekushanda. iTunes inowanzo kuve yeimwe eapplication ayo anogara achikanganiswa nemhando iyi yedambudziko. Kana iwe uri kunetsekana neTines paunenge uchitsvaga zvemukati izvo zvawakambotenga, angave mimhanzi, mafirimu kana chero imwe mhando yezvirimo, saka Isu tinokuratidza maitiro ekugadzirisa iri dambudziko rekushandisa.
Dambudziko iri rinoitika kana iyo application "yatora" izvo tine matambudziko ekubatanidza internet, saka kana tango bvisa dambudziko iri, tichivhura bhurawuza nechero peji rewebhu, isu titangazve Mac yedu uye isu tavimbisa kuti firewall harisi dambudziko, mhinduro chete inosara ndeiyi inotevera:
Isu tinonanga kutab Akaunti mune yepamusoro menyu bar.
Zvino tinya Tarisa uone zviripo uye isu tinopinda account ye password yedu.
Maitiro aya anofanirwa kugadzirisa chero matambudziko nekutora zvirimo izvo zvatakatenga kubva kuTunes, uye zvese zvemukati zvakamirira kurodha pasi zvinotanga kurodha pasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekugadzirisa iTunes kurodha pasi matambudziko paMac
Yekugadzira hurungudo: dhizaina vatauri padhesiki redu
Apple inofungidzirwa kuve inokwana $ 1 trillion gore rino